Baolina kitra – «CAN 2021» :: Manahy ny lalao amin’i Nizera i Nicolas Dupuis • AoRaha
Fohy ny fotoana sady mbola betsaka koa ny fotoana lany teny am-pandehanana nihazo an’i Niamey (renivohitr’i Nizera). Niteraka ahiahy ho an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra (Barea), ny fiverenan’ny ain’ireo mpilalao malagasy hiatrika an’i Nizera, anio.
“Efa nanao izay ho afany ny Federasiona nitady sidina mihoatra amin’ny fahateren’ ny fotoana. Na izany aza anefa miahiahy ihany aho amin’ny fiverenan’ny herin’ireo mpilalao”, araka ny nambarany, tamin’ny sabotsy lasa teo, tao­rian’ny lalao nihaonantsika tamin’ny Antilope Walya, avy any Etiopia.
Hotanterahina, anio, amin’ ny 7 ora hariva (ora eto Mada­gasikara) ny lalao hifanandrinan’ny Barea sy ny Mena, avy any Nizera. Ny tolakandron’ ny omaly vao tonga tany Niamey ny delegasiona mala­gasy, izay niainga ny alahady maraina sy hariva. “Mafy ho anay iny dia iny”, hoy hatrany i Nicolas Dupuis. Vantany vao tonga izy ireo dia niatrika avy hatrany ny fanazarantena tao amin’ny kianjan’ny Jene­raly Seyni Kountché, tao Niamey. Kianja mahazaka olona dimy arivo sy telo alina ity handray ny lalao ity.
Indroa nisy fiatoana ny sidina nandehanan’ny delegasiona malagasy nihazo an’i Nizera. Tao Nairobia (Kenya) no niato voalohany izy ireo, araka ny tatitr’ireo mpilalao tao amin’ny tambajotran-tserasera sosialy “Facebook”. Mbola nijanona kely tao Addis Abeba indray izy ireo ny maraina. “Niezaka ny namaha olana niaraka tamin’ny Fe­derasiona izahay. Efa tonga any Niamey ny Barea ary
miarahaba sy mirary soa azy ireo izahay”, hoy ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka, Ethiopian Airlines, omaly. “Vantany vao naheno izahay fa tavela tao Addis Abeba ny delegasiona malagasy andiany faharoa, ny marainan’ny alatsinainy, dia niantso tany izahay hama­hana ny olan’izy ireo. Tsy na­na­na olana ny andiany voa­lohany fa nahazo efitrano fandraisam-bahiny tao an-toerana”, hoy hatrany ny fanambaràna nataon’ny kaompania Ethiopian Airlines.
Tsy azo heverina ho ekipa kely ny Mena avy any Nizera. Ara-taratasy, mbola lasa alohan’ ny mpampiantrano ny Barea eo amin’ny filaharana navoa­kan’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) tamin’ny 24 oktobra 2019. Mitana ny laha­rana faha-107 ny Mena avy any Nizera, raha faha-95 kosa ny Barean’i Madagasikara.
I Libia sy Maoritania kosa no manelanelana antsika sy izy ireo eo amin’ny filaharan’ireo firenena afrikana.
Valanaretina covid-19 – Mitsabo tena miaraka amin’ny ankohonany ilay mpilomano
Basket-ball – “Juniors NBA” :: Hametraka tantara vaovao ny Federasiona